Nbudata Robin DR400 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 36 295
Yannick Lavigne-Fred Banting-Rob Young, FSX & P3D Usoro amụrụ site na Bluebear
21 / 10 / 2017: Xdị 2 ugbu a dakọtara na P3Dv4, agbakwunyere ndozi ọhụụ, arụmọrụ ụgbọ elu ka mma (omume mma idozi)
na nchịkọta emelitere na obere ihe.
18 / 04 / 2017: emelitere nke 10.2 nke nrụnye. Ugbu a ụmụ amaala 100% FSX. Agbakwunyere ihe ndozi omenala 8. Customda ọhụụ. Na-arụ ọrụ mebere kokpiiti na Prepar3D. Mmetụta ọhụrụ.
Robin DR400 dị elu nwere oke kokpiiti HD na 2D panel, gụnyere 8 idozigharị, ụda omenala, mmelite 100% maka FSX na P3D.
Robin DR400 bụ otu-engine ìhè ugbo elu ọtụtụ-eji na-efe efe klọb, mepụtara site na ụlọ ọrụ Avions Pierre Robin, now na-akpọ Robin Aircraft.
Ọ pụtara na 1972 site na-agbanwe iche iche nke DR300 (DR bụ mkpịrịsị nke Jean Délémontez na Pierre Robin). Tụnyere ndị a, abụọ okpukpe ji dị iche bụ wider ụlọ ubu na a iko n'elu ụlọ na slides na-atụ kama ibo, echiche ọhụrụ mbụ etinyere na Ọrụ Nchịkwa Mmadụ-1 na 1969. The camber nke nku-eme ka ọ dịkwuo mfe sterịn na a mma uloanumaanu. The dashboard dị elu ma ghọtakwuo.
Anyị na-ahụ na-ahụ ike dị banyere dị iche iche ụdị sitere na karịsịa engine, ụlọ bụ yiri. Naa dị ike na ụdị, ruo 120 HP, na-akpọ "2 + 2", ya bụ, maka ndị okenye abụọ na ụmụaka abụọ (ma ọ bụ atọ ndị okenye), ndị ọzọ niile quadriplaces ndị 180hp ewere enweghị nsogbu 4 njem, refueling na ụfọdụ akpa.
The imewe nke ugbo elu bụ agadi, ọ bụ a ala-nku entoilée osisi Ọdịdị dihedral nku n'ọnụ. The ala nku-enye ohere maka ndị magburu onwe visibiliti. Ọ bụ nke ụdị Jodel, nnọọ ihe e ji mara. Ọ nwere tricycle ọdịda gia, mfe iji wụnye karịa a ot ụgbọ okporo ígwè.
Ọ bụ ugbu a ka nnọọ ugbu a na ọtụtụ French efe efe klọb (aza ajụjụ maka 50% nke French aerospace park efe efe club), na ndị ọzọ ọtụtụ ebe na Europe. Nke a ugbo elu nwere a aha ọma ma n'ihi na ụlọ akwụkwọ na njem. (Wikipedia)
Onye edemede: Yannick Lavigne-Fred Banting-Rob Young, FSX & P3D Usoro amụrụ site na Bluebear
Ọ bụ ọhụrụ na CM170 v1.1 FSX